Maxaa ka soo baxay kulankii Ra’iisul wasaaraha Somaliya iyo madaxweynaha Bangiga Adduunka? +SAWIRRO | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka soo baxay kulankii Ra’iisul wasaaraha Somaliya iyo madaxweynaha Bangiga Adduunka?...
Maxaa ka soo baxay kulankii Ra’iisul wasaaraha Somaliya iyo madaxweynaha Bangiga Adduunka? +SAWIRRO
Washington (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha bangiga adduunka, David Malpass, ayaa kulankoodii labaad sannad gudihiis waxa ay ku yeesheen magaalada Washington ee dalka Mareynkanka.
David Malpass iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa intii uu socday shirkii guga ee IMF iyo Bangiga adduunka waxa ay bishii April 10, 2019 kulankoodii ugu horreeyay ku yeesheen isla magaalada Washington.
kulankii Ra’iisul wasaaraha Somaliya iyo madaxweynaha Bangiga Adduunka